Banyere Anyị - Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd.
一Onye anyị bụ?
Tọrọ ntọala na 2000, Shenxian Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd nke dị na Shandong, anyị nwere afọ 20 maka akụkọ kemịkal ọma, kemịkalụ kemịkalụ, ndị ọrụ inyeaka kemịkal. anyị bụ ndị nrụpụta ụlọ ọrụ pụrụ iche na-arụpụta Dibenzoylmethane (DBM) na furfural.The ụlọ ọrụ ugbu a m 350daha 350 mkpara, gụnyere 120 gụsịrị akwụkwọ na kọleji na 21 injinia na 5 ndị ​​ọkachamara akụ na ụba. , Shangqiu juyuan chemical manufactory na Liaocheng shuiyuan ọhụrụ ume technology manufactory.The ụlọ ọrụ oru ike dị ike, ule ule zuru okè na mmepụta akụrụngwa bụ magburu onwe.
Dịka otu n'ime ụlọ ọrụ ọkachamara kachasị n'ụwa Dibenzoylmethane (DBM) nke nwere ikike kwa afọ 10,000 metric tọn, dịka otu n'ime ndị ọkachamara n'ikike kachasị na ụwa na-enwe ikike kwa afọ 30,000 metric tọn. Ngwaahịa ndị a na-eji methanol na acetic acid sitere na cobs ọka, eji mee ihe nke Dibenzoylmethane na furfural, ọtụtụ ojiji, tumadi maka ọgwụ resin na resin ọgwụ na ezigbo ụlọ ọrụ kemịkal na mpaghara. Enwere ike iji ngwaahịa na-emepụta ọgwụ na mmepụta ọgwụ, furfuryl mmanya, ngwa nri, ekpomeekpo, resins na ngwaahịa ndị ọzọ.
Gịnị ka anyị na-emepụta?
Olee otú anyị Manufacturing Isi ？
Ọ bụ a factory nke 83,916 square mita tinyere 50,000 square mita omumuihe space.Company nwere ihe karịrị 350 mkpara, ike oru ike, nwere ọkachamara aku ọhụrụ ngwaahịa nnyocha na mmepe oru otu, na-na-ezigbo imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ anụ ụlọ ama na nkà mmụta sayensị institutes , anyị na-agbaso echiche nke nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ na nchedo gburugburu ebe obibi ọhụrụ PVC na-adịghị egbu egbu inyeaka okpomọkụ stabilizer Dibenzoylmethane (DBM) na furaldehyde na furfural ngwaahịa mmepụta na ụlọ ọrụ ire ahịa kwa afọ ikike nke 40,000 tọn, ụlọ ọrụ ahụ nwere mmepụta teknụzụ ụwa. ahịrị na nke akụrụngwa Dibenzoylmethane (DBM) nke ukwu n'ụwa, ogo ngwaahịa erutela ọkwa mba ụwa.
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị site na email anyị:
ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-agbalị ịza n'ime awa 12.